Shiinaha xereen buufin warshad mashiinka calaamadeynta iyo alaab-qeybiyeyaasha | MAKIINADDA ACE
Mashiinka calaamadeynta wadada oo buufiyo qabow
Mashiinka buufinta rinjiga rinjiga ee gacanta lagu riixo waa mashiin calaamadeynta buufinta hawo-la'aanta ah ee hawo-socodka ah. Mashiinkaan waxaa wata matoor si uu ugu riixo bamka tuujiya cadaadiska sare inuu shaqeeyo, ka dibna rinji rinjiyeyaasha inuu ku buufiyo cadaadis sare. Mashiinka oo dhan wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab-dhismeedka fudud, dayactirka habboon iyo miisaanka fudud. Iyo waliba noocyo kala duwan oo loogu talagalay qoryaha hal-labka ah iyo kuwa buufiska ah, dadka isticmaala waxay dooran karaan inay la kulmaan baahiyo kala duwan
Mashiinka calaamadeynta wadada riixitaanka gacmaha waxaa lagu dabaqaa astaamaha wadada ee garoonka diyaaradaha, baarkinka gawaarida, warshadda iyo aagga kale ee qabow oo leh howl fududeyn calaamadeyn, shaqaale yari, waxtarka sare ee sixitaanka.
TW-CP Rinjiyeyaasha Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Qiyaasaha dibedda (L * W * H) 1250 mm X1000 mm X1200mm
Wadarta miisaanka mashiinka 240KG
Mashiinka Awoodda Mashiinka 5.5HP Honda
Dahaadh ku habboon Rinjiga calaamadeynta buufin qabow (acrylic acid)
Rinjiga rinjiga 10L / Min
Xereen cadaadiska bamka 8-12MPA
Biiyaha ku habboon Qalabka Changjiang
Qoriga buufinaya Waxaa loo isticmaali karaa isku mar ama gooni
Dhumucda dahaadhka 1.2-4mm
Sanduuqa kuusha dhalada
Lidka nidaamka xakamaynta usheeda dhexe oo dabacsan
Waxtarka shaqada maalinlaha ah 3000m²
1.Faa'iidada tamarta iyo ilaalinta deegaanka: keydinta 30% qalabka marka la barbar dhigo ku buufinta hawada soo jireenka ah, ma leh kaalmo hawo, firiq la'aan, iyo ilaalinta deegaanka
Teknolojiyada xereen ee hawada la'aan ah ee wadata mashiinka cadaadiska sare leh mishiinka baatroolka ayaa lagu dabaqayaa si loogu calaamadeeyo garoonka isboortiga, qaabka xariiqda waa mid cad, siman, buuxa, iyo labis leh wax qabad sare.
3 Saamayn adag: Saamaynta atomikada ee cadaadiska sare, adhesion xoog leh, xagal dhiman oo dhismaha ah, oo siman iyo xitaa dusha sare.
Mashiinka mashiinka ayaa fududahay in la kala furfuro, oo nozzles kala duwan ayaa lagu beddeli karaa si loo xakameeyo ballaca xariiqa kala duwan. Waxaa loo isticmaali karaa buufin hawo guud ah si loo calaamadeeyo ama loo saxeexo.
5.Pushing by gacanta, jeestay si xor ah, hanuuninta lagu kalsoonaan karo iyo jihada dabacsan.
Qoriga lagu buufiyo kala duwan ee ballaca khadka kala duwan
Ballaca xariiqa mm
Mawjadaha dhererka mm （ku saabsan）
(Gaarsiin aan kala sooc lahayn)
Fiiro gaar ah: Dhererka afku wuxuu la xiriiraa u nuglaanta rinjiga iyo cadaadiska bamka lagu buufiyo.
1.Wax ku saabsan adeegga iibka kadib?
A: Waxaan mas'uul ka nahay inaan bixinno talobixin farsamo oo ku saabsan nolosha mashiinka oo dhan. Waxaan kaa caawineynaa xalinta dhibaatooyinka dhanka Whatsapp, Skype, iyo emayl adoo udiraya sawiro iyo muuqaalo.
3. Ka warran rarka?
Hore: Mashiinka calaamadeynta wadada iswada
Xiga: Mashiinka calaamadeynta wadada oo dhan
46inx2 Raac-on Trowel Power la taaban karo
ZID-UL-2000W Qalalaasaha la taaban karo ee Joogtada ah
12000RPM xawaare sare usheeda dhexe gariiriye birqaya
HCR90K-2 Gawaarida Tamping